Ubuntu na-anwa ịgbanwe Desktọpụ na HUD | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, Nkesa, GNU / Linux, Noticias
Ekwupụta m, mgbe m gụrụ akụkọ banyere HUD (Isi-Up Display) Aghọtaghị m ihe mgbaru ọsọ ya ma echere m na ọ bụ echiche ọzọ na-atọ ọchị nke ga-eme ka ndị ọrụ gbapụ Ubuntu, dị ka o mere na Ịdị n'Otu. Echere m otú ahụ ruo Ahụrụ m vidiyo na nkọwa nke otu teknụzụ a ga-esi rụọ ọrụ.
Ihu ọma ihe HUD ga-ezu (ihe ndị ọzọ), ọ ga-anọchi menu nke ngwa ahụ ma nye anyị ohere ịnweta ha naanị site na ịpị nhọrọ anyị chọrọ inweta. Anyị nwekwara ike ijikwa ngwa ngwa ndị ọzọ dịka ihe nchọgharị weebụ, saịtị mmeghe, ibe edokọbara ma ọ bụ email, naanị site na ịpị ihe anyị chọrọ na igbe ọchụchọ nke HUD.
Ihe ikwesiri ime bu igodo ntaneti [TAB] y HUD a ga-ahapụ ya. Mgbe ahụ, anyị na-ede "ihe anyị chọrọ ime" na HUD Ọ ga - emecha mechie, na - egosi nhọrọ ndị anyị chọrọ, anyị họrọ nke ziri ezi, anyị na - enye [Tinye] na Voilá !!!
Mana ọ bụghị naanị nke ahụ, HUD ga - enwe ike imuta ihe masịrị onye ọrụ, na-edekọ ihe niile anyị na-eme n'ime ụbọchị 30 gara aga iji nye ihe kacha mkpa maka anyị.
Ọ bụ echiche na-atọ ụtọ nke m kwuola ga-aga nke ọma. Maka ugbu a, m na-ahụ nsogbu dịka ekwuru na forums Gịnị ma ọ bụrụ na anyị amaghị nhọrọ nhọrọ? Echere m na ihe ga-abịa na ha, ka anyị kwuo ma eleghị anya, jiri ụzọ mkpirisi keyboard gosipụta menu ngwa. Na m tinye nke ahụ iji mezuo nzube a, HUD ịkwesịrị ịnakọta ọtụtụ ozi gbasara usoro m na-enyo, mee nke ahụ Ịdị n'Otu kwụsị ịdị arọ.
Ọ ga-adọrọ nnọọ mmasị ma ọ bụrụ na ndị ọzọ Gburugburu Ha ga-ewere echiche a ma mepụta ngwa na-enye ha ohere ime otu ihe ahụ. Ọ bụ ezie na amaghị m ma ọ bụrụ na E17 ma ọ bụ ndị njikwa windo ndị yiri ya nwere nhọrọ a. Maka ndị ọzọ, echere m na ọ bụ nnukwu echiche ga-agbanwee usoro anyị sirila rụọ ọrụ Oche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Ubuntu na-anwa ịgbanwe Desktọpụ na HUD
Dịka m nwalere, E17 enweghị nhọrọ ahụ.
Ebumnuche ahụ na-adọrọ mmasị, mana ọ na-arụ ọrụ?
Ọ ga-adabere na onye n'ezie.
N'oge a ọ naghị akpọ m, maka m ọ pụtara ịhapụ ọrụ na ọsọ, ebe ịnyagharị site na ntụgharị na otu menu nwere ike bụrụ ihe siri ike. Ọ bụ echiche na-adọrọ mmasị maka ngwaọrụ emetụ, mana ọ bụghị maka desktọọpụ.
Ma eleghị anya, m na-ezighị ezi na ọ bụ n'ezie, n'ọdịnihu, ụzọ bara uru na nke ọma iji rụọ ọrụ na mmemme.
Otu ihe m kwuru. Mana anyị ga-echere ya ka o tozuo iji hụ nhọrọ ndị anyị nwere yana etu o si arụ ọrụ. Ma ọ dịkarịa ala ihe ị na-ahụ na vidiyo na-adọrọ mmasị.
HUD ga-abụ nhọrọ, nchịkọta nhọrọ ga-adị mgbe niile
Ikwuru eziokwu, ị kwesịrị ịkọwapụta nke a na ntinye, nke na - eduga n'ọgba aghara na ndị mmadụ na - eche na Canonical na - etinye ụzọ ya ... xDDDD.
Yabụ, ọ bụrụ na nchịkọta nhọrọ ụwa na HUD na-ebikọ ọnụ (opekata mpe na 12.04, amaghị m ego ole) niile bụ uru. Arụ ọrụ ugbu a anaghị efu ma maka ndị maara etu esi eji ngwa mgbagwoju anya nke ọma (GIMP ma ọ bụ ụdị Inkscape, nke nwere ọtụtụ nhọrọ) ọ ga-enye ha ohere ịme ngwa ngwa ma bulie ọsọ ọsọ ọrụ ha.
Na nkenke, otu m si ahụ ya, ọ dị ka ọ bụ nnukwu echiche. Ọ na-enye m na site n'ọganihu dị ka nke a, ndozi ndị dị na GNOME 3 nwere nhọrọ ndị ọzọ, Unitydị n'otu na-egbu maramara na ngwa ngwa na afọ 5 LTS, nsụgharị Ubuntu ọzọ ga-abụ ezigbo ihe ịtụnanya ... 🙂
Nwoke ochie elva amalitela ịkụbanye ya na aha Picajo $ o, yabụ na ọ dị ntakịrị Ubuntoso
Ikekwe abụ m onye na-ezighi ezi, mana enwere m obi abụọ na onye nọ na ngwa dịka GIMP ma ọ bụ Inkscape nke a na-eweta "agility na speed na-arụ ọrụ." Ndị ahụ bụ ngwa ebe aka dị na oke (ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ nke ndị nrụpụta ji) yana nke a, ọ ga-adị mkpa ịgbanwe aka na keyboard.
Ihe HUD ga - eme (n'etiti ihe ndị ọzọ) bụ iji dochie menus ngwa ma nye anyị ohere ịnweta ha site na ịpị nhọrọ anyị chọrọ inweta.
Ihe na rere ure apụl nwere ruo ọtụtụ afọ karịa ụkwara
Y’oburu n’itule ihe eji achapu ma obu ngwa ngwa, ha abughi otu. Ọ bụrụ na ọ bụ ngwa ọzọ, m ga-enwe mmasị ịmara ya.
Azịza nye ...
M na-ekwu maka Chakwasa ihie, mana Agaghị m enweta ọtụtụ ihe na nke a na m na-ahụrịrị ọdịnihu dị nso
Ọfọn ọ bụghị otu. Agaghị m enwe mkparịta ụka.
O di nwute na Chakwasa ihie ka mma XD
Na-elekọta canonical, ma eleghị anya, ọ na-ama patented site apụl na goodbye HUD na ihe niile na-ekwe nkwa ga-eme n'ọdịnihu.
site na igbe ahụ, enwere m mmasị na ihe niile na - eme ka oghere ihuenyo buru ibu, ma ọ bụrụ na iji ụzọ dị mma arụ ọrụ
Ọ bụrụ na m na-ekwu na ọ bụ na-abaghị uru n'ihi na mụ onwe m ji ya a otutu na Mac, ma adịghị eweta ya dị ka ibu ọhụrụ nke akụkọ ihe mere eme
Ọ bụ ihe ọhụrụ na desktọọpụ Linux, ikekwe enwere ihe yiri ya, nke dị ezigbo anya, na KRunner; ma MAC nwere ya ma ọ bụ na ọ bụ nzuzu; Na oge ọ bụla mmadụ wepụtara ihe n'ahịa, ọkachasị ma ọ sitere na Canonical, ị gụrụ onwe gị: "Mac enweworị ya."
MAC dị ochie ma ọ bụ karịa Windows, ma ọ bụ naanị 2 ọzọ, dị ka nke ahụ, ma ọ bụ a isomi ya na otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Mana dịka echiche gị si dị, anyị niile kwesịrị ịkwụsị mmepe, iche echiche, itinye oge, ego na iji MAC (ma ọ bụ windo xp), maka na ihe niile dị MAC nwere ya ma mechaa bụrụ nnomi.
Na oge ọ bụla mmadụ wepụtara ihe n'ahịa, ọkachasị ma ọ sitere na Canonical, ị gụrụ onwe gị: "Mac enweworị ya."
1: Na-amasị m ihe mbụ
2: Canoni $ oft na-egosi ihe niile dị ka nnukwu ihe ọhụụ nke narị afọ, na ọtụtụ n'ime ha bụ ihe ndị ọzọ distros nwere ma ọ bụ na Mac nwere ogologo oge.
N'aka nke ọzọ, ebum n'uche m bụ na ọ bụrụ na Mac enweworị ihe ka mma na ha anaghị e copyomi ya ma mepụta ihe na izizi nke distro
Echere m na ị na-echefu na ọ bụghị ihe niile na-echepụta ihe ọhụrụ ...
You cheghị na tupu imalite X ihe, ị ga-ebu ụzọ mee ihe yiri ya ma ọ bụ ihe yiri ya?
Ma eleghị anya, HUD ee, ọ dị nnọọ ka ihe dị na Mac na enwere ike ịkpọ ya otu, mana ma ọ bụrụ na oge agafee, ọ ga - enwe ndozi, ihe ọhụrụ nke ọbụlagodi Mac ga - abụ 🙂
Ọ dị mma, ọ ga-aka mma i toomi ihe ndị ọzọ mere ma chee ya dị ka nke gị
Nope, oke nile di ojoo haha.
Nanị ihe na mbido ya nwere ike ọ gaghị abụ nke mbụ na ụwa, mana emesịa ọ nwere ike ịnye ọrụ / nhọrọ ọhụrụ nke "mbụ" enweghị 🙂
Ma ọ ka bụ ihe onye ọzọ mere, na Canoni $ oft atụkwasịla 4 shit na ya ma gosi ya dị ka nke ha.
Na na etiti okwu bụ ihe dị mma bụ ụgha
Fuck i yiri ezigbo Ubuntosos ma gi ma aja
M hiere ụzọ, Achọrọ m ịza n'okpuru n'ihi na ọ na-aga
Echere m na ị na-emegharị launcher ngwa, faịlụ, ebe, ibe edokọbara wdg. Abụghị otu.
Ekwusila ike na agaghị m arụrịta ụka ...
Gosi m ụfọdụ vidiyo ntaneti 1000 na YouTube nke m na-eme otu ihe ahụ dị ka ngwa a ma m mechie ọnụ.
Ihe HUD ga - eme (n'etiti ihe ndị ọzọ), bụ iji dochie menu ngwa na ọ ga - enyere anyị aka ịnweta ha naanị site na ịpị nhọrọ anyị chọrọ inweta.
Nke ahụ n’atụghị egwu na-egosipụtakwa.
Ihe bụ eziokwu bụ na dịka isiokwu ahụ HUD nwere ọtụtụ ihe, anyị ga-ahụ nkwụsi ike (echere m ya) na ịme ihe ọzọ ọ ka bụ echiche nke Apple
Enwere m naanị obere obi abụọ na-enweghị isi. Have hụla vidiyo ahụ?
Ee, ama m mara ihe HUD na-eme. Mana anọ m na-achọ ịchọta isiokwu ma ọ bụ vidiyo YouTube ruo oge ụfọdụ nke na-agwa m otu m ga-esi mee ya na Chakwasa ihie ma enweghị m ike ịchọta ya. Anaghị m agagharị. Nke a bu na m ghotara ihe omuma bu ihe yiri krunner ma obu gnome-do.
Ndo mgbe ahụ, echere m na ọ na-agagharị.
Echere m na KRunner adịghị ka Chakwasa ihie n'ihi na na KRunner ọ bụ maka iwu
Enwere m Mac O $ X maka otu afọ (nke ị maara) na anyị nwere Macbook Pro n'ụlọ (nke na-abụghị nke m)
Ekwesịrị m ikiri vidiyo?
Ee, lee vidio ahụ, ọ bụghị iji mee ka ị maa jijiji, kama ka oge na-aga, IJI kwuo ihe i chere.
Agwala m agwa gị ihe m chere, ọ bụ Ubuntu nke a na-eme dị ka nnukwu ihe ọhụụ nke narị afọ, n'oge a eziokwu bụ na enwechaghị m mmasị maka vidiyo n'ihi na m na-ehi ụra karịa ihere.
Ee e, ị gosipụtara na ị bụ onye na-akwado ịkatọ Ubuntu. Nwoke, lee vidiyo ahụ wee kọwaa nke ọma .. 😀
@elav <° Linux, ị nweghị ike ịrịọ "ubuntu hater" maka ebumnuche.
Nwoke ọ bụghị nke ahụ, mana ọ bụ eziokwu ọbụlagodi na m kpọrọ asịdụ aja aja
Ọ dị m ka Obi ike dị mma.
Taa, ahụrụ m nke a:
Amaghị m otu ị ga - esi hụ nkwupụta ahụ, mana etinyegoro m vidiyo vidiyo abụọ nke yiri ka otu furu efu. Nke ọzọ bụ nke a (Atụrụ m anya na ọ pụta):
Zas niile Sandy na ọnụ Elva
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị amaghị nhọrọ nhọrọ?
Kwesighi ịma nhọrọ; ịkwesịrị ịma ihe ịchọrọ ime, site na mgbe ahụ gawa, ọ bụrụ na HUD na-arụ ọrụ dịka o siri chọọ, ọ ga-ewepụ nhọrọ ndị dịnụ. Ka anyị kwuo na inwere igwe nyocha ihe mara ihe.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na amaghị m maka nhọrọ menu, enwere m ike iji ọtụtụ awa - dịka m nwere - ọbụlagodi menu ochie.
N'ikpeazụ gbasara ma ọ ga-abụ nhọrọ ma ọ bụ na ọ gaghị. Ọ bụrụ n’inwe olile anya na ọ ga - enwe olile anya n’egosi Ubuntu 12.04; nyere ntozu oke nke HUD na Precise ahụ ga-abụ LTS ọ nwere ike ịnhọrọ maka ịnwale. Na Ubuntu 12.04 ọ gaghị edochi menu; ma ọ na-atụ anya na n'ime ọzọ mmepe cycles ọ ga-. Ihe niile ga-adabere na mmepe, njikọta nke ọrụ dịka nhọta olu na nnabata ngwaahịa a.
N'ikwu eziokwu, ọ bụ ihe ọhụụ ma ewere m na ọ bụ ihe ịga nke ọma nke Canonical ha gbalịrị iji ya tụnyere mmemme ndị ọzọ dịka Krunner na Synapse, mana o doro anya na ha bụ ihe dị iche iche.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe akaebe na-abụghị, m ga-achọ ịnụ banyere ya.
Ihe ojoo, choro Unitydị n'otu iji ya mee m umengwụ ka m ghara iche na m ga-eji ya, echere m maka ihe ọzọ na XFCE ka ọ dịrị.
Omenala menu: imeghe mmemme = 2 clicks nke bọtịnụ aka ekpe ekpe.
Ihe ohuru ohuru a:…?
Okwu bụ isi bụ iji kọmputa ede ihe, nke ọtụtụ na-ahaghị ka nkasi obi ma ọ bụ ọsọ ọsọ. Onye kwuru na ide ihe niile bara uru?
Maka ndị ọkachamara, nke a nwere ike ịbụ ọganihu, mana maka ndị na-amu amu, naanị otu ihe mgbagwoju anya na ụwa nke ubuntu.
Ekele diri onye obula huru ya.
Ma na na na keyboard who .. onye kwuru na ọ bụ ihe ọma na-enwe na-dee ihe niile?…. Ubuntu anaghi enye…. Ọ na-apụta na anyị ga-pịnye ma chere ka ọ nye anyị nsonaazụ achọrọ ... Nke a dị mma na ngwa "ọchụchọ ma ọ bụ njikwa faịlụ ma ọ bụ njikwa" a kapịrị ọnụ. Ma na niile ngwa na usoro onwe ya na-akpa àgwà dị ka nke a…. ọ ga-eme dịka na Unitydị n'Otu.
Cheta na n'ikpeazụ ihe a niile nwere otu ebumnuche: Mbadamba, Mobile, TV ...
Otu nkọwa: ị na-ekwu na ị ga "pịnye ma chere ka ọ nye anyị nsonaazụ achọrọ." Nke ahụ abụghị eziokwu, ma ọ bụ kama, ọ ga-eru eru.
HUD ọ bụghị naanị na-enyocha menu maka mkpụrụ okwu dabara na ọchụchọ gị, ọ na-amụkwa ihe na ha. Ya mere, na ihe atụ Inkscape nke na-egosi na vidiyo gọọmentị, ọ bụrụ na ịchọọ nza ma tinye ya n'ọrụ, sistemụ ahụ "mụtara" site na nke ahụ na oge ọzọ ị gaghị pịnye ọtụtụ ihe maka ịchọ otu nzacha ahụ, ebe ọ maara na enwere ike na ịchọrọ ya ọzọ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ngwa ahụ enweghi oke omimi ma ọ bụ nhọrọ, ị gaghị enwe ike pịnye ọtụtụ ihe iji chọta ọrụ ịchọrọ ịme, nri? 🙂
Obi ruru m ala ịmata na HUD bụ nhọrọ, agụọla m na UL ma ọ nweghị onye kọwara ihe ọ bụla: S
Ee, ee, ee… .. ha na - anwale akwara niile (na aka nri) na ihu nkwado ọhụrụ.
Ihe dị ka nke kachasị dị ka Enso Launcher nke gbara kemgbe ọtụtụ afọ maka Win ma ọ bụ ihe ịtụnanya na nghọta ya na oge ole ị ga - enweta mgbe ị nwetara ya, nke, dịka m na - ekwu, anaghị efu ukwuu.
Ọ bụghị naanị onye na-ebido mmiri, yabụ echeghị m na ọ bụ ihe ọzọ maka ngwa menu kama ọ bụ ihe mgbakwunye, ọ bụ maka inwe ike ịme ụdị omume ọ bụla kwa ụbọchị ọsọ ọsọ.
Obi dị ha ụtọ na ha wepụrụ ụdị ngwa a maka ubuntu, m ga-anwale ya.
Ọ bụrụ na m chọrọ Ubuntu ka ọ rụọ ọrụ ide ederede, anyị agaghị achọ gburugburu ebe eserese ... Ubuntu ga-abụ TERMINAL nke na-erepịa ego bara ụba. Nsonaazụ = UBUNTU bụ WINDOWS VISTA ọhụrụ
Ndị European Commission bịanyere aka na ACTA